kugcine ukuphendulwa ngu cj02139 1 isonto elidlule
kubuzwe ngu bbartrug 1 isonto elidlule
kugcine ukuphendulwa ngu Al Smith 1 isonto elidlule
Using Windows 10, when I accepted an update to TB 68.2.1 and then opened TB, the window was empty - no emails, no folders, no ability to use the drop-down menus. The men… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu jbickhar 1 isonto elidlule
kubuzwe ngu JSteed 2 emasontweni adlule
When trying to set up sync, I have installed the google provider, but am unable to create a new calendar, that choice does not seem to exist. I have done this before, and… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu David Hartung 2 emasontweni adlule
I'm using Firefox Focus on Android and for some reason the browser won't let me select from drop-down menus. This occurs on any site with a drop-down and continues even w… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu e.holland1 3 emasontweni adlule
kugcine ukuphendulwa ngu eoshoko 1 isonto elidlule
After some time running, Thunderbird is constantly using between 40 and 60% of the CPU. I have to close and restart Thunderbird for the CPU usage to drop in the single d… (funda kabanzi)
kubuzwe ngu pablanche 6 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu aardbooks2 2 emasontweni adlule
While getting ready to send the details I was able to get the address book and filters to work OK. I still don't know why the upgrade was so painful. It may be related … (funda kabanzi)
kubuzwe ngu w1az 2 emasontweni adlule